आफ्नो सौन्दर्यतालाई निखार्न महिलाहरुले विशेषगरी आफ्नो अनुहारको छालामा धेरै ध्यान दिन्छन् । तर जापानी महिलाहरुको छालाको सौन्दर्यताको चर्चा सधै चल्ने गर्छ । यहाँका महिलाहरु आफ्नो उमेरभन्दा सधै बीस वर्ष कलिला देखिन्छन् ।
आज हामी तपाईलाई जापानी महिलाहरुको सुन्दर छाला पछाडीको उपाय बताउँछौं । तपाई पनि ती उपायहरु अप्नाएर सुन्दर छाला पाउन सक्नुहुन्छ ।
१. चामलको पानी
छालामा चमक र नरमपना चाहानुहुन्छ भने चामल धोएको पानी एउटा राम्रो औषधी हो । चामलमा पाइने भिटामिनले छालालाई पोषण दिन्छ । धेरै जापानी महिलाहरुले चामलको पानीले अनुहार र कपाल धुन्छन् । यसका लागि एक कप पानीमा चामललाई १५ मिनेट जति भिजाइदिनुहोस् । त्यसपछि त्यो पानीलाई एउटा बोतलमा भरेर एक दुई दिनसम्म अनुहार तथा कपाल धुन प्रयोग गर्नसक्नुहुन्छ ।
२. स्वस्थकर खाना
सुन्दर छालाको लागि स्वस्थकर खाना एकदमै आवश्यक छ । जापानमा धेरैजसो ताजा फलफूल र सब्जीको सेवन गरिन्छ । यहाँ प्रसोधित खानाको कमै प्रयोग हुन्छ । भुटेको तील र गुलियो पदार्थ यहाँ रुचाइँदैन । माछा, अन्न, सब्जी र फलहरु यहाँ सेवन गरिन्छ ।
समुद्री खानाबाट बनेको फेसमास्क अनुहारको लागि एकदमै राम्रो हुन्छ । यसका लागि फुडको पाउडरलाई तातो पानीले र जैतूनको तेलमा मिलाएर अनुहारमा लगाउनुपर्छ । १५ मिनेटपछि त्यसलाई धोएर हेर्नुहोस् ।
४. कोलेजन लेभल
छालामा सधै कोलेजन लेभल धेरै हुनुपर्छ । यो कम भयो भने छाला चाढै चाउरी पर्छ । छालामा कोलेजनको लेभल कायम राख्न जापानी महिलाहरु माछा, चिकेन, अण्डाको सेतो भाग, हरियो र अमिलो फलको प्रयोग गर्छन् ।
५. स्टिम बाथ
स्टिम बाथ जापानी परम्परा नै हो । एसेन्शियल ओय र टीको साथमा नुहाउन जापानी महिलाहरु मन पराउँछन् । यो थेरापी वाला स्नानले उनीहरुको छालालाई थप सुन्दर बनाउँछ ।
६. ग्रीन टी
जापानीहरुलाई ग्रीन टी एकदमै धेरै मन पर्छ । उनीहरु ग्रीन टी पिउनुका साथै त्यसको फेसमास्क बनाएर अनुहारमा पनि लगाउँछन् । यसले अनुहारलाई चम्किलो बनाउँछ ।